LED Display တပ်ဆင်နည်း
မှန်ကန်မြန်ဆန်သော တပ်ဆင်မှုတစ်ခုအတွက်၊ မျက်နှာစာများ သို့မဟုတ် ခေါင်မိုးများပေါ်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းများတွင်သာမက ကုန်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ကိုပါ အကာအကွယ်ပေးခြင်းအတွက် လူများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို အပြည့်အဝလေးစားမှုဖြင့် ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသော ပရိုတိုကောများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။
1. ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ခြင်း။
ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း LED ဗီဒိုများကို ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန် ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ရမည်။ဤအဆင့်တွင်၊ မျက်နှာပြင်ပြသသည့် module များကိုဆွဲယူခြင်း သို့မဟုတ် မထိမိစေရန် ဂရုပြုရပါမည်။ပန်းကန်ပြားများ၏ထောင့်များနှင့် ဘေးနှစ်ဖက်တွင်ရှိသော LED မီးများကို အထူးသတိထားရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုနေရာများတွင် မှုတ်ထုတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
2. LED မျက်နှာပြင်ကို နေရာချထားခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း။
စခရင်ကို စတင်တပ်ဆင်ရန်၊ မော်ဂျူးများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဘေးတွင်ထားရှိရပါမည်။ဗီရိုများတွင် အပေါ်ပိုင်းနှင့် ဘေးတိုက်အစိတ်အပိုင်းများတွင် အလျားလိုက်နှင့် ဒေါင်လိုက် ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် ချိတ်ဆက်နိုင်စေမည့် ချိတ်တွဲယန္တရားများရှိသည်။
ဒေတာဝါယာကြိုး လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဘယ်ဘက်အောက်ခြေရှိ ဗီရိုများကြားရှိ ဇစ်ဇတ်အစီအစဥ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ထို့နောက် modules များသည် data in နှင့် data out port သို့ချိတ်ဆက်ထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်မှုများဖြင့် စခရင်တစ်ခုလုံး၏ မှန်ကန်သောဝိုင်ယာကြိုးကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင် အရောင်ချိန်ညှိခြင်းနှင့် တောက်ပမှု ဆက်တင်ကို လိုက်နာပါ။
ဖန်သားပြင်တွင် ပေါင်းစပ်ထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများကြောင့် ပါဝါဝါယာကြိုးများ ပြီးမြောက်ရန် လွယ်ကူသည်။
Led မျက်နှာပြင် LED ရုပ်ထွက် Outdoor Led မျက်နှာပြင် Led Display မျက်နှာပြင် Outdoor Led Display ၊ ဆိုင်းဘုတ်